sarrifka Cryptocurrency amartay in ay joojiyaan ganacsiga Somailand by jaangooyaha Jarmal
Jarmal ilaalinta dhaqaalaha Authority (BaFin) ayaa ku amartay Crypto.exchange GmbH, sarrifka ku salaysan Berlin a, si degdeg ah u joojiyaan simaha sida Somailand dhaqaale.
Amarka la soo saaray ka dib markii is-dhaafsiga lagu xayeysiiyaa ay website, btc-now.de, in ay iibin doonto bitcoins macaamiisha ee euros oo iyaga iibin on sarrifka stock ah, ayaa sheegay in BaFin war qoraal ah oo. Shirkadda ayaa sheegtay in qiimaha iibka waxaa loo wareejin lahaa in maal gudahood 30 daqiiqo, waxaa ku darayaa.
Sida laga soo xigtay BaFin, ganacsi guddiga maaliyadda ee ku shaqeeya by Crypto.exchange GmbH aan la oggol yahay jaangooyaha ah. Hay'adda dhaqaale qaatay go'aanka ka dib markii users sheegay in Iyaguse ma ay dhowayn, waayo, wax lacag ah cryptocurrency in lagu wareejiyay shirkadda, dalalka Bloomberg.
hoosaad Swiss Sberbank ee ku ganacsan doono cryptocurrency
Dhismaha hoosaad ee Sberbank ee Switzerland ayaa isku diyaarinaya in ay bilaabaan ganacsi ee cryptocurrency macaamiisha, ayaa sheegay in Andrei Shemetov, Madaxweyne ku xigeenka ee Sberbank oo madax ka ah suuqyada caalamka maalgashi – Sberbank CIB. Tani waa markii ugu horreysay ee adeeg noocan ah waxaa loo soo bandhigay by bangiyada Ruush.
“Shayga waa mid aad u khatar ah, Degenaansho waa mid aad u ballaaran, sidaas awgeed ma ku siin doontaa adeegyadan in tiro balaadhan oo ah macaamiisha… Waxaan hadda isku diyaarineysa kaabayaasha oo dhan si ay u bilaabaan adeegyada gudahood hoosaad Swiss… Waxa aanu dhisaynaa Mudanayaasha ganacsi oo buuxa si aan labada furi kara booska noo gaar ah oo ay bixiyaan adeegyada macaamiisha, in uu yahay, la iibsado iyo iibiyaan si ay macaamiisha.”
Samsung ayaa bilaabay wajigii soosaarka chips ASIC for macdanta cryptocurrency
Bell ayaa (website Korean news) ayaa sheegay in Samsung ayaa bilaabay saara chips for macdanta Seeraar bishan.
Warbixinta ayaa sheegay in Samsung ayaa heshiis kula saxiixatay shirkad Chinese hardware la xiriira macdanta Seeraar, waxaana uu bilaabay inuu wax soo saarka hore chips ah – xiganaya rasmi ah Samsung aan la aqoonsan.
Waxa kale oo socda oo u sheegay in Samsung ayaa sidoo kale dhameystirtay horumarinta ee semiconductors ASIC for Seeraar macdanta sannadkii hore.
Telegraam qorshaynaysa mul ...
bangiyada UBS hore la ...
3 beroosh ah macdanta Seeraar ...
Post Next:Sidee si ay u noqdaan sameeysa a blockchain